UVimba wase-UKX-Funda ukuRhweba
Ukuhlaziywa: 27 January 2022
Ukuxhathisal: 7500, 7600, 7700
I-FTSE 100 (UKX) yexesha elide: Ukuthwala
I-FTSE 100 (UKX) ikwi-downtrend kodwa ithetha ukuba uxinzelelo lokuthengisa lunokwenzeka. Okwangoku, i-UKX ingaphezulu kwe-50-day SMA kodwa ingaphantsi kwe-21-day SMA. Oku kuthetha ukuba isalathiso kunokwenzeka ukuba sibotshelelwe phakathi kwee-avareji ezihambayo. I-UKX iye yabuyiselwa kwi-downtrend kodwa abathengi bafumanisa kunzima ukuphuka ngaphezu kwenqanaba le-7500. Ukuqhawula ngaphezu kwenqanaba le-7500 kuya kugcina isalathisi ngaphezu kwee-avareji ezihambayo. I-UKX iya kuba kwindawo ye-bullish. Amaxabiso esalathiso aya kunyuka ukuze aphinde avavanye ukuchasana okuphezulu.
I-UKX ikwinqanaba le-52 ye-Relative Strength Index kwixesha le-14. Isalathiso sikwindawo ye-uptrend kwaye iyakwazi ukunyuka phezulu. . Ixabiso lesalathiso liphakathi kwee-avareji ezihambayo ezibonisa uluhlu olunokwenzeka lokuhamba. I-SMA yeentsuku ezingama-21 kunye ne-50 yeentsuku ze-SMA zithambekele phezulu zibonisa ukunyuka.
Kwitshathi yeyure ezi-4, i-UKX ikwi-uptrend kodwa irhweba ngaphantsi kwee-avareji ezihambayo. Ukunyuka okuphezulu kuye kwathintelwa kwinqanaba le-7500. Ixabiso lenkcazo liwela emva kokuhlaziya ukuchasana kwinqanaba le-7500. Isalathiso sibuyele kwinqanaba le-7469, i-UKX inokuthi iphinde ibuyele phezulu.
Isalathiso singaphezulu koluhlu lwe-50% yestochastic yemihla ngemihla. Isalathiso sikwisantya esiphezulu. Isantya se-bullish khange azinze.
I-FTSE 100 (UKX) ijongene nokunye ukugatywa oku kuthetha ukuba uxinzelelo lokuthengisa lunokwenzeka. Kamva, ixabiso le-UKX lilungiswe phezulu kodwa ukulungiswa okuphezulu kujongene nokuchasana kwi-7500. Intsingiselo kukuba iibhere zinenjongo yokutyhala amaxabiso phantsi,
I-FTSE 100 ityhala kwi-Upside, ijongene nokukhatywa kwinqanaba le-7600
Inqanaba lokumelana: 7500, 7600, 7700
Inqanaba lenkxaso7300, 7200, 7100
I-FTSE 100 (UKX) yexesha elide iTrend: Bullish
I-FTSE 100 (UKX) ikwi-uptrend njengoko ijongene nokugatywa kwinqanaba le-7600. Isalathiso sifikelele kwi-7,615 8 yeedola kwaye sikhuphe umva. I-uptrend iqhubekile phezulu. Okwangoku, ngoDisemba 50 uptrend; umzimba wekhandlela ofunyenweyo uvavanye i-2.0% yenqanaba lokubuyisela iFibonacci. Ukubuyisela kwakhona kubonisa ukuba i-UKX iya kunyuka kwinqanaba le-7751.71 ye-Fibonacci yokwandisa okanye inqanaba le-XNUMX. Imakethi iyanda kwaye isondela ekwandiseni iFibonacci.
I-UKX iphakame kwinqanaba le-62 ye-Relative Strength Index ixesha le-14. Isalathiso sikwindawo ephakamileyo kwaye iyakwazi ukunyuka phezulu.UKX ine-bullish crossover. Oko kukuthi, i-SMA yeentsuku ezingama-21 iwela ngaphaya kwe-50-day SMA ebonisa umyalelo wokuthenga. Ii-SMA zeentsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 zithambeka phezulu zibonisa ukonyuka. Ixabiso lesalathisi lisengaphezulu kwemiyinge ehambayo ebonisa ukunyuka okunokwenzeka.
Kwitshathi yeyure ezi-4, i-UKX ikwi-uptrend. I-uptrend yenza uluhlu lweendawo eziphakamileyo eziphezulu kunye nezisezantsi eziphezulu. Isenzo sexabiso sibonakaliswa ngamakhandlela amancinci omzimba abizwa ngokuba yiDoji. Isalathiso siseza kuphula ukuchasana kwi-7600 ngokuqinisekileyo.
I-UKX ingaphezulu kwe-50% uluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Isalathiso sikwisantya esiphezulu. I-bullish trend itsalwa ebonisa amanqanaba enkxaso yamaxabiso. I-uptrend iyaqhubeka ukuba ixabiso lihlala lingaphezulu kwee-avareji ezihambayo okanye umgca wokuhamba. Nangona kunjalo, i-uptrend iya kupheliswa ukuba ixabiso liyehla ngaphantsi kwee-avareji ezihambayo okanye umgca wokuhamba.
I-FTSE 100 (UKX) i-uptrend iyaqhubeka kodwa ijongene nokugatywa kwinqanaba le-7600. Ixabiso lenkcazo liye langaphambili lenze uluhlu oluphezulu oluphezulu kunye nezantsi. I-uptrend inokuba ifikelele ekudinweni kwe-bullish.
I-FTSE 100 iqhubela phambili iBullish Run, iNqanaba ekujoliswe kulo 7700
FTSE 100 (UKX) iqhubekile nokunyuka kwayo njengoko ijolise kwinqanaba le-7700. Ixabiso lenkcazo liye laqhubeka lenza uluhlu oluphezulu oluphezulu kunye noluphantsi. Okwangoku, ngoDisemba 8 uptrend; umzimba wekhandlela ofunyenweyo uvavanye i-50% yenqanaba lokubuyisela iFibonacci. Ukubuyisela kwakhona kubonisa ukuba i-UKX iya kunyuka kwinqanaba le-2.0 ye-Fibonacci extension okanye inqanaba le-7729.40.
I-UKX iphakame kwinqanaba le-64 ye-Relative Strength Index ixesha le-14. Isalathiso sikwindawo ye-uptrend kwaye iyakwazi ukunyuka phezulu. Ii-SMA zeentsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 zithambeka phezulu zibonisa ukonyuka. Ixabiso lesalathisi lingaphezulu kwee-avareji ezihambayo ezibonisa ukunyuka okunokwenzeka.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, i-FTSE 100 ikwi-uptrend. I-uptrend yenza uluhlu lweendawo eziphakamileyo eziphezulu kunye nezisezantsi eziphezulu. I-uptrend yangoku ijongene nokukhatywa kwinqanaba le-7600 yokumelana nendawo. Umgca we-bullish trends utsaliwe ubonisa amanqanaba enkxaso yamaxabiso.
I-UKX ingaphezulu kwe-80% uluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Imarike ifikelele kwingingqi ethengiwe ngokugqithisileyo. Abathengisi banokuthi bavele kummandla othengwe ngokugqithisileyo ukutyhala amaxabiso ezantsi. Ii-SMA zeentsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 zithambeka phezulu zibonisa ukonyuka.
I-FTSE 100 (UKX) iye yahambelana nokunyuka kwayo njengoko ijolise kwinqanaba le-7700. Okwangoku, ijongene nokugatywa kwinqanaba le-7600 yokumelana nendawo. I-uptrend iya kuqalisa kwakhona xa ukuchaswa kwinqanaba le-7600 kuphulwa.
I-FTSE 100 iNqanawa ukuchasa kwiNqanaba le-7400, iNqanaba ekujoliswe kulo 7763.30
I-FTSE 100 (UKX) ikwi-uptrend njengoko ijolise kwinqanaba lama-7763.30. Iinkunzi zenkomo ziye zaphula ukuchasana kwinqanaba le-7400. Abathengi baphule ukuchasana, baxhathisa, ngaphambi kokuba baphinde baqalise phezulu. I-uptrend yangoku ifikelele kwinqanaba le-7516.86. Okungaphezulu kunokwenzeka. Okwangoku, ngoDisemba 29 uptrend; umzimba wekhandlela ofunyenweyo uvavanye inqanaba le-61.8% lokubuyisela iFibonacci. Ukubuyisela kwakhona kubonisa ukuba i-UKX iya kunyuka kwinqanaba le-1.618 isandiso seFibonacci okanye inqanaba le-7624.93.
I-UKX iphakame kwinqanaba le-66 ye-Relative Strength Index ixesha le-14. Ibonisa ukuba isendaweni ye-uptrend kwaye iyakwazi ukunyuka phezulu. Ii-SMA zeentsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 zithambeka phezulu zibonisa ukonyuka. Ixabiso le-crypto lingaphezulu kwee-avareji ezihambayo ezibonisa ukunyuka okunokwenzeka.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, i-FTSE 100 ikwi-uptrend. Ixabiso le-index libuyele ukuphula ukuchasana kwinqanaba le-7400. Okwangoku, ngoDisemba 8 uptrend; umzimba wekhandlela ofunyenweyo uvavanye i-50% yenqanaba lokubuyisela iFibonacci. Ukubuyisela ukubuyisela kubonisa ukuba i-UKX iya kunyuka kwinqanaba le-2.0 yokwandiswa kweFibonacci okanye inqanaba le-7763.30.
Isalathiso singaphezulu koluhlu lwe-80% yestochastic yemihla ngemihla. Imakethi ifikelele kwindawo ethengwe ngokugqithisileyo. Abathengisi banokuthi bavele kummandla othengiwe kakhulu ukutyhala amaxabiso ezantsi. Ii-SMA zeentsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 zithambeka phezulu zibonisa ukonyuka.
I-FTSE 100 (UKX) ikwi-uptrend njengoko ijolise kwinqanaba le-7763.30.Isalathiso sinokunyuka ngakumbi njengoko singaphezulu kwee-avareji ezihambayo. Istochastic yemihla ngemihla ibonise ukuba imarike ifikelele kwindawo ethengwe ngokugqithisileyo kwimarike. Okwangoku, ijongene nokuchasana kwinqanaba le-7,550.
I-FTSE 100 (UKX) Iphule iNqanaba le-7400, i-May Resume Uptrend
I-FTSE 100 (UKX) iyenyuka njengoko inokuphinda iqalise ukunyuka. Ixabiso le-UKX liqhekeza ngaphezu kwee-avareji ezihambayo. Namhlanje, abathengi bazama ukophula ngaphezulu kwenqanaba le-7400 lokuxhathisa. Ukusukela ngoNovemba 11, inqanaba lokuchasa elingaphezulu lisaza kwaphulwa. Okwangoku, ukunyuka okunyukayo kujongene nokwaliwa kwinqanaba eliphezulu lamva nje. I-UKX iya kuhlangana kwinqanaba le-7700 ukuba ukuchasana kwe-overhead kuphulwa. Okwangoku, ngoDisemba 8 uptrend; umzimba wekhandlela ofunyenweyo uvavanye i-50% yenqanaba lokubuyisela iFibonacci. Ukubuyiswa kubonisa ukuba i-UKX iya kunyuka kwinqanaba le-2.0 yokwandiswa kweFibonacci okanye inqanaba le-7763.30.
I-uptrend yakutshanje iqhubele isalathisi kwinqanaba le-62 ye-Relative Strength Index kwixesha le-14. I-UKX ikwindawo yokunyusa kwaye ikwazi ukunyuka ukuya phezulu. I-uptrend ithintelwe kwinqanaba le-7400. Ixabiso lesalathisi lisengaphezulu kwee-avareji ezihambayo ezibonisa ukunyuka kwamaxabiso okunokwenzeka. Umndilili ohambayo uthambekile ngokuthe tye ubonisa intshukumo esecaleni.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, i-FTSE 100 ikwindlela esecaleni. Isalathiso sisaguquguquka ngaphantsi kokuchasana okuphezulu kwinqanaba le-7400. Namhlanje, imarike yafikelela kwinqanaba eliphezulu le-7450 kodwa yachaswa. Imakethi ibuyile kodwa iphinda iqale phezulu. Ukuxhathisa okungaphezulu kucingelwa ukuba kwaphukile ukuba isantya se-bullish sangoku sigciniwe.
Isalathiso singaphezulu koluhlu lwe-80% yestochastic yemihla ngemihla. Leyo yimakethi ifikelele kwindawo ethengwe ngokugqithisileyo. Intsingiselo yeyokuba isalathiso sinokuhla kuba abathengisi banokuvela batyhale amaxabiso ezantsi.
I-FTSE 100 (UKX) ikwisantya esiphezulu njengoko inokuphinda iqalise i-uptrend. Ukususela ngoNovemba 11, ukunyuka kuye kwathintelwa kwinqanaba le-7400. Ukuba iinkunzi zeenkomo ziphula ukuchasana kwe-overhead, kuya kubonisa ukuqaliswa kwakhona kwe-uptrend.
I-FTSE 100 (UKX) Ibuyisela kwakhona kwaye iqalise kwakhona i-Uptrend, iinzame zokuphula iNqanaba le-7400
I-FTSE 100 (UKX) iye yaphuka ngaphezu kwee-avareji ezihambayo njengoko izama ukuphula inqanaba le-7400. Intsingiselo kukuba isalathisi siya kunyuka siye phezulu. Ukususela ngoNovemba 11, abathengi baye bahluleka ukugcina ixabiso lesalathisi ngaphezu kwezinga le-7400. Kwinyanga edlulileyo, iinkunzi zeenkomo ziye zafumana ukugatywa kathathu. Umzamo wesine wenziwa ukubuyisela ukuchasana okuphezulu kwinqanaba le-7400. I-FTSE 100 iya kukhwela kwinqanaba le-7800 ukuba ukuchasana kwe-overhead kuphulwa. Okwangoku, ngoDisemba 8 uptrend; umzimba wekhandlela ofunyenweyo uvavanye i-50% yenqanaba lokubuyisela iFibonacci. Ukubuyisela ukubuyisela kubonisa ukuba i-UKX iya kunyuka kwinqanaba le-2.0 yokwandiswa kweFibonacci okanye inqanaba le-7754.19.
I-uptrend yakutshanje iqhubele isalathisi kwinqanaba le-57 ye-Relative Strength Index kwixesha le-14. Ibonisa ukuba i-UKX ikwindawo yokunyusa kwaye ikwazi ukunyuka ukuya phezulu. Isalathisi siyakwazi ukuwela phantsi. Umyinge ohambayo uthambekile ngokuthe tye ubonisa intshukumo esecaleni. Ixabiso lesalathiso lingaphezulu kwemiyinge ehambayo ebonisa ukunyuka kwamaxabiso okunokwenzeka.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, i-FTSE 100 ikwindlela esecaleni. Isalathiso siye sahamba ngecala ukusuka ngoNovemba 11. Ngalo lonke ixesha iinkunzi zeenkomo ziphinda ziphinde ziphinde zichase ukuchasana kwe-overhead, imarike iya kuwela kwi-low yangaphambili. Namhlanje, ukunyuka okunyukayo kuqale kwakhona njengenqanaba lokuvavanya kwakhona i-index 7400.
Isalathiso singaphezulu koluhlu lwe-80% yestochastic yemihla ngemihla. Oku kuthetha ukuba isalathisi sifikelele kwingingqi ethengwe ngokugqithisileyo kwimarike. I-uptrend inokujongana nenye ukwaliwa. Oko kukuthi, abathengisi baya kuvela ukutyhala amaxabiso ezantsi.
I-FTSE 100 (UKX) ihambela phezulu njengoko izama ukuphula inqanaba le-7400. Isalathisi esiphezulu sithintelwe ngaphantsi kwenqanaba le-7400. Iinkunzi zeenkomo ziseza kuphuka ngaphezu kokuchasana okuphezulu.
I-FTSE 100 (UKX) iyancipha ukuya kwiNqanaba le-7129, ayikwazi ukugcinwa ngaphezu kweNqanaba le-7360
I-FTSE 100 (UKX) iye yawa ngaphantsi komyinge ohambahambayo emva kokuhlaziya ukuchasana kwinqanaba le-7360. Kwisenzo sexabiso sangaphambili, ngoNovemba 11, iinkunzi zeenkomo zagxothwa kwinqanaba le-7360. Isalathiso sangena kwinqanaba le-7200 kwaye kamva kwinqanaba le-7040. Ukwehla kwangoku kunokwenzeka ukuba yandisa kwinqanaba le-7080 ngaphambi kokuba kuqaliswe kwakhona i-uptrend.
Isalathisi sikwinqanaba le-44 ye-Relative Strength Index kwixesha le-14. I-UKX ikwindawo ephantsi kwe-downtrend kwaye ingaphantsi kwe-centerline 50. Isalathisi siyakwazi ukuwa phantsi. Ii-SMA zeentsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 zithambekile ngokuthe tye ebonisa indlela esecaleni. Ixabiso lesalathisi lingaphantsi kwee-avareji ezihambayo ezibonisa ukuwa okunokwenzeka kwesalathisi.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, i-FTSE 100 ikwintshukumo ezantsi. Ixabiso lesalathisi liphule ngaphantsi kwee-avareji ezihambayo. Kukho amathuba okuhla nangakumbi amaxabiso. Okwangoku, ngoDisemba 13 downtrend; umzimba wekhandlela ofunyenweyo uvavanye i-78.6% yenqanaba lokubuyisela i-Fibonacci. Ukubuyisela kwakhona kubonisa ukuba i-UKX iya kuwela kwinqanaba le-1.272 isandiso seFibonacci okanye inqanaba le-7181.74.
Isalathisi singaphantsi kwe-20% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Oku kuthetha ukuba i-downtrend iphelile. Abathengi banokuvela banyuse amaxabiso phezulu. I-avareji ezihambayo zikhomba phezulu zibonisa ukunyuka.
I-FTSE 100 (UKX) isendleleni ehlayo. I-UKX iwele kwindawo ethengisiweyo. Isalathiso kusenokwenzeka ukuba siqalise intshukumo ephezulu. Isalathiso sinokubuyela kumanqanaba aphantsi angama-7083 kunye nama-7129 ngaphambi kokuba aqalise ukuya phezulu.
Unokuthenga iingqekembe ze-crypto apha: Thenga uphawu
I-FTSE 100 (UKX) iiRali ukuya kwiNqanaba le-7400 yoMmandla wokuchasa, iMay iFace Rejection
I-FTSE 100 (UKX) ikwinqanaba eliphezulu. Abathengi baye batyhala i-UKX ngaphezu kwemiyinge ehambayo. I-uptrend ifikelele kwaye iphinda ihlaziye izinga lokumelana ne-7400. I-FTSE 100 ijongene nokukhatywa kwindawo ephakamileyo yangaphambili. Ukuba i-UKX iyancipha, iya kuphinda ibuyele kwinqanaba eliphantsi le-7200. I-uptrend iya kuqalisa kwakhona ukuba iphinda ibuyele ngaphezu kwee-avareji ezihambayo.
Isalathiso sikwinqanaba le-58 ye-Relative Strength Index ixesha 14. I-UKX ikwindawo ephakamileyo kwaye ingaphezulu kwe-centerline 50. I-21-day kunye ne-50-day-SMAs ihlahlela phezulu ibonisa ukunyuka. Ixabiso le-crypto lingaphezulu kwee-avareji ezihambayo ezibonisa ukunyuka okunokwenzeka kwesalathisi.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, i-FTSE 100 ikwinyathelo eliya phezulu. Isalathiso sivukile kwaye sibuyisela indawo yokuchasana kwinqanaba le-7400. I-UKX ibonakala ifikelela kwindawo ethengisiweyo yemarike.
Okwangoku, ngoDisemba 1 downtrend; umzimba wekhandlela ofunyenweyo uvavanye i-50% yenqanaba lokubuyisela iFibonacci. Ukubuyiswa kubonisa ukuba i-UKX iya kunyuka kwinqanaba le-2.0 yokwandiswa kweFibonacci okanye inqanaba le-7322.27.
Isalathiso singaphezulu koluhlu lwe-80% yestochastic yemihla ngemihla. Isalathisi sifikelele kummandla othengwe ngokugqithisileyo. Abathengisi baya kuvela ukutyhala amaxabiso ezantsi. I-avareji ezihambayo zikhomba phezulu zibonisa ukunyuka.
I-FTSE 100 (UKX) ifikelele kwaye ifikelele kwindawo yokuchasana ye-7400. Nangona kunjalo, isalathisi sibuyisela umva njengoko sifikelela kummandla ogqithisiweyo. I-uptrend iya kuphinda iqalise ukuba ixabiso libuyela ngaphezu kwee-avareji ezihambayo.
I-FTSE 100 (UKX) iqala kwakhona i-Uptrend kodwa ijongene nokuchasana kwinqanaba le-7190
I-FTSE 100 (UKX) isendleleni ephantsi emva kokukhatywa kwinqanaba 7400. I-downtrend ifikelele ekuphelelweni kwe-bearish. Isalathiso siphinde savela ngaphezu kwenqanaba le-7005 kwaye isondela kwinqanaba eliphezulu le-7220. Kukho amathuba okuba isalathisi esijongene nokuchasana kwinqanaba eliphezulu le-7220. Isalathiso siya kuphinda siqalise ukuthambekela xa ixabiso liphuka ngaphezu kwee-avareji ezihambayo.
Isalathiso siwile kwinqanaba le-46 ye-Relative Strength Index ixesha 14. I-UKX ikwindawo ephantsi kwe-downtrend kwaye ingaphantsi kwe-centerline 50. I-21-day kunye ne-50-day-SMAs ihla inyuka phezulu ibonisa ukunyuka. Ixabiso le-crypto lingaphantsi kwee-avareji ezihambayo ezibonisa ukuwa okunokwenzeka.
Kwitshathi yeyure ye-4, i-FTSE 100 iphinda ibuyele emva kokuthotywa kwe-downtrend yakutshanje. Ukulungiswa okuphezulu kujongene nokukhatywa kwi-SMA yeentsuku ezingama-21. Okwangoku, ngoNovemba 19 downtrend; umzimba wekhandlela ofunyenweyo uvavanye i-50% yenqanaba lokubuyisela iFibonacci. Ukubuyisela kwakhona kubonisa ukuba i-UKX iya kuwela kwinqanaba le-2.0 isandiso seFibonacci okanye inqanaba le-6998.34.
Isalathiso singaphezulu koluhlu lwe-50% yestochastic yemihla ngemihla. Isalathiso siphinde saqala ukunyusa amandla. I-avareji ezihambayo zikhomba ezantsi zibonisa i-downtrend.
I-FTSE 100 (UKX) iphinde yafumana amandla e-bullish. Nangona kunjalo, i-UKX ijongene nokukhatywa kwinqanaba le-7200 yokumelana nendawo. Ikhefu elingaphezulu komgangatho wamva nje liza kutsala isalathiso kwindawo ye-bullish.
I-FTSE 100 (UKX) i-Uptrend, ijongene nokugatywa kwinqanaba le-7400
I-FTSE 100 (UKX) Ikwimo ephezulu kodwa ijongene nokukhatywa kutsha nje. Isalathiso sinqabile ukuya kwinqanaba lama-7198 kwaye saphinda saqalisa ukunyuka. Okwangoku, isalathisi singaphezulu kwe-50-day SMA kwaye ingaphantsi kwe-21-day SMA. I-uptrend iya kuqalisa kwakhona xa ixabiso liqhekeza ngaphezu kwe-SMA ye-21 kunye nokuchasana kwinqanaba le-7400. Ngaphandle koko, i-UKX iya kuqhubeka iguquguquka phakathi kwee-avareji ezihambayo. Okwangoku, ngoNovemba 12 uptrend; umzimba wekhandlela ofunyenweyo uvavanye i-50% yenqanaba lokubuyisela iFibonacci. Ukubuyiswa kubonisa ukuba i-UKX iya kunyuka kwinqanaba le-2.0 yokwandiswa kweFibonacci okanye inqanaba le-7832.71.
Isalathiso siwele kwinqanaba le-53 ye-Relative Strength Index ixesha le-14. I-UKX ikwindawo ye-uptrend kwaye iyakwazi ukuqhubela phambili. Ii-SMA zeentsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 zithambeka phezulu zibonisa ukonyuka. Ixabiso le-crypto liphakathi kwee-avareji ezihambayo ezinokuthi zibangele intshukumo yoluhlu
Kwitshathi yeeyure ezi-4, i-FTSE 100 ikwintshukumo ephezulu kodwa iyasilela ukwaphuka ngaphezu kwemiyinge ehambayo. Isalathisi sibuyisela ukuchasana kwinqanaba le-7300. I-UKX inokujongana nokukhatywa kunye nokuwa okulandelayo. Okwangoku, ngoNovemba 22 uptrend; umzimba wekhandlela ofunyenweyo uvavanye i-78.6% yenqanaba lokubuyisela i-Fibonacci. Ukubuyiswa kubonisa ukuba i-UKX iya kunyuka kwinqanaba le-1.272 isandiso seFibonacci okanye inqanaba le-7291.27.
Isalathiso singaphezulu koluhlu lwe-80% yestochastic yemihla ngemihla. Isalathiso siwele kummandla othengwe kakhulu kwimarike. Abathengisi kulindeleke ukuba bavele kwindawo ethengiwe kakhulu.
I-FTSE 100 (UKX) iphinde yaqala ukunyuka kwayo. I-uptrend ijongene nokuchasana kwinqanaba le-7400. I-uptrend yangoku iye yawa kwinqanaba lokuhamba. I-uptrend inokuphinda iqalise xa ixabiso liphuka ngaphezu kwe-21-day SMA.
← Entsha izithuba1 2 ... 10 abaDala izithuba →